SIMBA, UTSUNGE MOYO
"Asi usimbe nokutsunga moyo kwazvo, kuti uchenjere kuita murayiro wose ..." (Joshua 1:7).
Iwe unogona kunge uri Mukristu. Unogona kunge uri kurarama murutendo. Asi zvinhu zvinogona kumbowoma. Panguva dzakadai, zvinogona kuita sekuti Mwari vakusiya uri woga. Asi usafunga kudero. Ishe vari kutotaura kwauri ikozvino. Vari kuti, "Panguva dzakadai, ndinenge ndiinewe. Nokuti ndinogara mukati mako. Saka simba. Tsunga moyo kwazvo." Izvi zvinoreva kuti haufaniri kuzununguswa.
Ita zvakaita Abrahama. Mwari vakanga vavimbisa kumupa mwana. Haana kukanganwa vimbiso iyi. Rutendo rwake rwakaramba rwakasimba. Akaramba achitarisira mwana uyu. Haana kuzununguswa. Izvi zvakaita kuti mbiri yaMwari ivonekwe. Izvi ndizvo zvatinoziviswa neBhaibheri. Tinozviverenga muna VaRoma 4:20. Saka usataura uchiti, "Ini handichanzwisisi kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndaneta nematambudziko ose aya". Kwete! Matambudziko angauya hawo. Asi anongouya kuti uagadzirise. Matambudziko anovinga vaya vane simba rokumirisana nawo. Saka unogona kunge uri kusangana nezvinhu zvinotsvaka kukukanganisa. Zvinhu izvi hazvipo kukuwisira pasi. Hazvina simba rokukukurira. Hapana munhu anosangana nematambudziko anomukurira. Saka matambudziko aya aripo kutokusimbisa. Kunotova kudya kwako. Saka usavora moyo. Usapererwa nesimba.
1 Johane 4:4 inotaura kuti iwe uri waMwari. Izvi zvinoreva kuti wakazvarwa naMwari. Kristu vava kugara mukati mako. Kristu ava ndivo vakuru. Vanodarika zvimwe zvinhu zvose. Saka ungasangana hako nematambudziko. Ungasangana hako nezvinhu zvinotsvaka kukukanganisa. Ungasangana hako nevanhu vanokurwisa. Ungasangana hako nezvinhu zvinokurwisa. Wakatokurira zvinhu izvi zvose. Saka batirira kuShoko raMwari.
Vana chiremba vanogona kunge vakakuudza kuti chibereko chako chakafa. Vanogona kunge vakakuudza kuti mapapu ako haachashandi zvakanaka. Vanogona kunge vakakuzivisa kuti hauchina mazuva akawanda okurarama. Usanetseka nemashoko ose aya. Usavora moyo. Usabvuma kuti wakundikana! Mira parutendo. Mira neShoko raMwari. Zvinogona kuita sekuti zvinhu hazvichina tariro yekunaka. Asi iwe ramba uchitarisira kuti zvichanaka. Vimba neShoko raMwari. Unozokurira zvinhu izvi zvose!
Rinogona kunge riri dambudziko mumhuri mako. Kuda uri kunetseka pamusoro pevana vako. Kuda uri kurwadziwa mumuviri mako. Hama yako inogona kunge iri kutambura zvikuru. Ndakuunzira nhau dzakanaka. Zvinhu zvose izvi zvichapera. Uchatozoudza vamwe kubatsirwa kwawakaitwa muzvinhu izvi. Izvi ndizvo zvatinoratidzwa muna 2 VaKorinte 4:17. Inoti, "... kutambudzika kwedu, kwakareruka, kuripo chinguva chiduku, kunotiitira kubwinya kukuru kwakaisvo-naka kusingaperi".
Saka kurira zvinonetsa izvi. Mushure mazvo, uchawana kubwinya. Pane zvakanaka zvakakumirira mberi! Vimba neShoko raMwari. Shoko iri rine simba. Simba iri rinogona kukukundisa. Rinokukundisa pazvinhu zvose. Hazvina basa kuti zvinhu izvi zvinenge zvakashata zvakadini.
Jehovha ndivo Chiedza changu. Ndivo ruponeso rwangu. Ndivo simba rangu. Ndivo rusvingo rwehupenyu hwangu! Saka ndinomira ndakasimba murutendo. Handina chandinotya. Ndinosimbiswa nesimba ravo. Ndine chinhu chandinoziva. Iye wakatanga chinhu chakanaka mandiri, uchachipedzisa zuva raJesu Kristu risati rasvika. Shoko raMwari ndiro randinomira naro. Saka matutu ehupenyu haagoni kundieredza. Mwari ngavapiwe mbiri yose!